ရှမ်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
>Metro Phone affordable for Burmese on the move
>U Win Pe translated Inge Sargent's Book back in 1995
အောင်ခိုင်မြင့် ● တော်လှန်ရေး နိုင်ငံရေးနှင့် ဘဝအတွေ့ အကြုံများ - အပိုင်း (၂)
မောင်မောင်စိုး ● နောင်ငစ် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈ နောင်ငစ်သည် ဝ နယ်မြောက်ပိုင်း မိုင်းမောခရိုင်တွင်ရှိသော အမြင့် မီတာ ၂၁၀၀ တွင် တည်ထားသော မြို့ကလေးဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်နေရာသည် မီတာ...
အညတရ ● ပုံဖျက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စလည်း အရေးကြီးတယ် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ အသိညီငယ်တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းမေးပါတယ်။ “အစ်ကို၊ Editorial ဆိုတာ ဗမာလိုဘာလဲ” တဲ့။ မြန်မာပြည်မှာ မွေး၊ ဗမာစကားပြောပြီး ဗမာလိုကြီးလာတဲ့လူတစ်ယောက်က...
ပုံဖျက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စလည်းအရေးကြီးတယ် ထိပ်တန်းဖြစ်ရပ်များကို ဂရုစိုက်နေရချိန်မှာ ဘာသာစကား ပုံဖျက်ခံနေရခြင်းကိုလည်း အလေးထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် အညတရ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂ဝ၁၈ ရန်ကုန်မြို့မှ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ် အရောင်းဈေးကွက်မှ ဖြန့်ဝေသူတစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ – ဇာနည်ဝင်း/Myanmar...
မေသနပ်ခါး ● မစားကောင်းသောသစ်သီးများ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၈ (၁) အချို့သော သစ်သီးများသည် မှည့်၏။ ဝင်း၏။ ချို၏။ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်၏။ သို့သော် သူတပါး၏ မျက်ရည်ဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသော...
စန္ဒာမော် (Myanmar Now) ● ဘိန်းစိုက်ပေမယ့် ဆင်းရဲသည်ထက် ဆင်းရဲလာတယ် (အင်တာဗျူး) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၈ တအာင်းဒေသ၏ ပညာရေး နှင့် ဒေသခံတို့အကြောင်းကို အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ပြောပြထားသည်။...
ကြည်ဇော်ဝင်း – ကိုခင်လွန်းရေ….အောင့်လုံးတွေကိုဖောက်ခွဲတော့မယ် …. နားထောင် (၂)
ကိုခင်လွန်းရေ….အောင့်လုံးတွေကိုဖောက်ခွဲတော့မယ် …. နားထောင် (၂) ကြည်ဇော်ဝင်း ကိုခင်လွန်းရေ …. ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ စာရေးပြီး အသက်မွေးလို့ရတဲ့သူကို လက်ချိုးရေတွက်လို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ စာရေးဆရာအများစုဟာ ဘဝကိုရောင်းချပြီး ကိုယ်မွေးမြူထားတဲ့ ကလောင်တချောင်းအတွက် ပေးဆပ်နေရတဲ့သူတွေပါ။ အရပ်သားဒေါက်တာနည်ဝင်းက စာရေးဆရာကြည်ဇော်ဝင်းရှင်သန်ဖို့...
စာရေးဆရာကြီး ခင်မောင်တိုး(မိုးမိတ်) ကွယ်လွန်၊ ဈာပန စက်တင်ဘာ ၃ရက် ရေဝေးမှာ သင်္ဂြိုဟ်မယ် K (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၈ စာရေးဆရာကြီး ခင်မောင်တိုး(မိုးမိတ်)ဟာ ၂၀၁၈၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်...
ထိုက်နန္ဒာဝင်း (Myanmar Now) ● အရပ်ဘက်ပဋိပက္ခ လျော့ကျလာသော တအာင်းဒေသ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၈၊ ၂၀၁၈ မရပ်နိုင်သေးသောတိုက်ပွဲတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ရှမ်းနှင့်ပလောင်ကြား စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း၊ နားလည်မှု လွဲမှားခြင်းတို့ကို အများအားဖြင့် ပြန်လည်...